म अर्को टिमको भन्ने मानसिकता नत्याग्दा टानको विवाद टुंगिएन | tour Khabar
म अर्को टिमको भन्ने मानसिकता नत्याग्दा टानको विवाद टुंगिएन
बहुमतले गलत निर्णय गर्‍यो भन्नुको सट्टा नोट अफ डिसेन्ट लेखे भैहाल्यो नि
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को नेतृत्व र कोषाध्यबीचको विवाद जुहारी झै चलेको छ । कोषाध्यक्ष लिलाबल्लभ दाहालले नेतृत्व र टानको कार्यसमितिले आर्थिक अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका बेला टान कै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले भने गलत मानसिकता भएका व्यक्तिका कारण विवाद लम्बिएको दाबी गरेका छन ।
अध्यक्ष रिजालले फरक समूह भन्ने मानसिकता हावी भएका सहयात्रीका कारण आफ्ना प्रत्येक कामलाई विफल बनाउन खोजेको र राम्रो काम गरेपनि आफ्नो नराम्रो इमेज बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । टानका कोषाध्यक्ष लिलाबल्लभ दाहालसँगको कुराकानीपछि टानको संस्थागत विवाद किन र कहिलेसम्म भनेर अध्यक्ष रिजालसँग कुराकानी गरेका छौं ।
० कार्यसमिति चयनसँगै सुरु भएको विवाद अझै सकिएन है ?
– विगतमा पनि यहाँ भित्र विवाद थियो नै । हाम्रो नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएर आएको केहि समयपछि पनि विवाद आएको थियो । फेरि अहिले पनि विवाद देखिएको छ । हामी आइसकेपछि आर्थिक पारदर्शिताको एजेन्डा, राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउँदै विशुद्ध व्यवसायिकतालाई ध्यानमा राखी नियमकारी निकायको रुप लैजाने प्रयास गर्‍यौँ ।
व्यवसायिक संस्थामा व्यवसायीका एजेन्डामा छलफल गर्ने, व्यवसायीका समस्या समाधानमा लाग्ने भन्दै नियमनकारी निकायमा जाने, रचनात्मक काम गर्ने, मजदुरहरुका समस्या समाधान गर्ने भन्ने एजेन्डा उठाएर चुनावमा जित हासिल गरेका थियौँ ।
स्वभाविकै हो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा चित्त नबुझेका अथवा फरक विचार राख्ने, हाम्रो यो एजेन्डालाई मन नपराउने साथीहरु अर्को टिमबाट उठ्नु भएको थियो ।
यसरी अर्को टिमबाट उठ्ने दुई जना साथीले चुनाव जितेर हाम्रो टिममा आइपुग्नु भयो ।
त्यसमा पनि मुख्य रुपमा कोषाध्यक्षको आर्थिक एजेन्डालाई पारदर्शी बनाउने, आर्थिक पक्षलाई व्यवस्थित बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उहाँ चाहिँ अर्को टिमबाट चुनाव जितेर आउनु भएको थियो ।
मलाई चाहि के लाग्यो भने चुनाव जितिसकेपछि उहाँले म चाहिँ अर्को टिमबाट निर्वाचित भएको हूँ भन्ने मनसाय त्याग्न सक्नु भएन । टान त एउटै टिम हो । एउटै टिम भएपछि म फलानो टिमको, ढिस्कानो टिमको भन्ने हुनुहुँदैन थियो ।
तर, त्यही भयो । मलाई उहाँ त्यस्तो खालको भावनाबाट मुक्त हुनुभयो होला भन्ने लागेको थियो, तर हुनु भएको रहेन छ ।
त्यसैले सुरुमै आएको दुई/तीन महिनामै उहाँले विवाद सिर्जना गर्नुभयो ।
जब कि हामी आउनु भन्दा अगाडिका कार्यसमितिहरुले गरेका कार्यहरुका बारेमा नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरुले चासो राखेका थिए । हामी आएपछिको यो कुरा होइन ।
तर विगतमा भएका नकारात्मक कुराको समर्थन गरेर आउने साथीले नै आज चाहिँ आर्थिक पारदर्शिताको कुरा गर्नुहुन्छ ।
मैले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्न सकेको छैन । बोल्ने र गर्ने व्यवहार फरक हुनुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो ।
० अनि विवाद मिलाउने जिम्मेवारी तपाईंकै हैन र ?
– मैले भन्नै पर्छ, धेरै मान्छेमा फरकफरक स्वभावहरु हुन्छन् । मिलाउनलाई प्रयत्नै गरिएन होला भन्ने तपाईंलाई लागेको हो भने अहिले आएर किन विवाद भयो ? अब त हामी चार–पाँच महिना भन्दा बढी त रहँदैनौँ । विधानले दिएको समयावधी भन्दा बढी त हामी रहँदैनौँ । अन्तिममा आएर हामीले विवाद गर्नु पर्ने कारण त थिएन । त्यसैले मिलाउन धेरै प्रयत्न गरियो । मिलाउँदा मिलाउँदै केहि नमिलेपछि त विधानले दिएको अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै हामी अघि बढ्नु पर्ने स्थिति आइ लाग्यो ।
त्यसैले विधानलाई नमान्ने, कार्यसमितिको बहुमतको निर्णलाई नमान्ने, मैले भनेको सबै थोक हुनु पर्छ, भएन भने चाहिँ तोडफोड गर्छु, टानलाई जलाइदिन्छु, म चाहिँ गुण्डागर्दी गर्छु भन्ने प्रवृत्ति आयो भने तपाईं कसरी मिलाउन सक्नु हुन्छ ?
अध्यक्षले त सम्झाउने बुझाउने, नियम कानूनअनुसार चल्नु होस्, कहाँनेर गल्ति भो, हामी सच्याउँछौँ भन्दाभन्दै पनि त्यो नगर्ने, एक्कासी पत्रपत्रिकाहरुमा नकारात्मक कुरा गर्ने, बैठकमा नकारात्मक कुराहरु गर्ने, सकारात्मक कुरा, बहुमतका कुरा सुन्नै नचाहने, नियत बसनै कसैले संस्थालाई बिगार्छु भन्यो भने त अध्यक्षले, सिंगो कार्यसमितिले पक्कै पनि एक खाल्को निर्णय लिन बाध्य हुन्छ । कुनै व्यक्तिले खुकुरी लिएर सडकमा दौडिन्छ भने त्यो समाजले उसलाई किन नियन्त्रण गरेन भन्ने हुँदैन । त्यो त समयक्रम अनुसार राज्यले अथवा कुनै निकायले नियन्त्रणमा लेला । तर उसले खुकुरी लिएर दौडिनुमा राज्यलाई अथवा समाजलाई दोष दिनुको कारण म चाहिँ देख्दिनँ ।
० तपाईंको कोषाध्यक्षले त विधि प्रक्रियाबाहिर गएर काम गर्न खोज्दा चेक साइन नगरेको भन्नुभएको छ ।
– खै ! विधानमा के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले मात्रै पढ्नु भा’को, जान्नु भा’को हो कि ? जब कि पहिला महालेखाले के कुरा उठाएको छ भने एक पटक एड्भान्स लगिसकेपछि त्यो फस्र्योट नभएसम्म अर्को पटक एड्भान्स दिनु हुँदैन । भनेपछि एक पटक एड्भान्स लगेको मान्छेलाई फेरि अर्को पटक एड्भान्स दिएँ भनेर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो हान्छौँ र ?
० सहकोषाध्यक्षको हस्ताक्षर सदर गराउन चाहिँ प्रयास गरेको हो ?
म तपाईंलाई अघिल्ला केही कुरा गर्न चाहन्छु । मेरो कुरा के छ भने बहुमतको निर्णय यदि गलत छ भने कोषाध्यक्षले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्छ । आफु फस्न सक्छु भन्ने लाग्यो भने । अनि त्यसपछि उहाँले चेकमा साइन गर्नुपर्छ ।
उहाँले यदि चेकमा साइन गर्नु भएन, हरेक कुरामा चाहिँ बहुमतले गलत निर्णय गर्‍यो भनेर चेकमा साइन गर्नु भएन भने के हुन्छ संस्था ? मलाई त्यसको जवाफ दिनुस् त ! अथवा समाज त्यसको जवाफ देओस् त मलाई ।
अब अर्को कुरा तपाईंले सहकोषाध्यक्षको कुरा गर्नुभो । सहकोषाध्यक्ष त अहिले आएको होइन नी ! अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष भन्या के हो ? त्यसको व्याख्या हुनु पर्‍यो । त्यस्तै कोषाध्यक्षको अनुपस्थितिमा सहकोषाध्यक्ष भन्या के हो ?
अनि कोषाध्यक्षको अनुपस्थितिमा सहकोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्षको अनुपस्थितिमा कार्यसमितिको एक जना सदस्य भनेर आज होइन २०३५ सालमा बनेको र अहिलेसम्म धेरै पटक संशोधन भएर आएको विधानमै उल्लेख छ । त्यो मैले बनाएको हो र ? यो त पहिलाकै कुरा हो । जति बेला यो बनिएको थियो त्यति बेला म एसएलसी दिँदै थिएँ होला ।
त्यसैले सहकोषाध्यक्ष पनि अहिले आएको होइन ।
० त्यसो हो भने पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड कोषको रकमका विषयमा विवाद भएको हो ?
– हैन हैन । टिम्सको पैसा नआओस भनेर केही लागेका छन । टिम्सको पैसाबाट कामदारको हक अधिकार स्थापनाका कुरा, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेलगायतका काम हुन्छन् । कामका लागि गएकाहरुको उद्दारमा भएको खर्च, विभिन्न स्थानमा जोखिममा परेकाहरुको उद्दारका लागि प्रयोग गरिएका हेलिकोप्टरको पैसा पनि हामीले तिर्न बाँकी छ । यदी त्यो रकम आयो भने उनीहरुले तिर्छन र छवि राम्रो बनाउँछन् भन्नेहरु पनि छन ।
अहिले टानको हालत यति बिग्रेको छ कि कसैले आर्थिक रुपमा टानलाई पत्याउने अवस्था छैन । तपाईंलाई थाहा छ हिजो पर्यटन बोर्डमा पनि आर्थिक अपारदर्शिता भयो भनेर पारदर्शिताको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने पनि हामी नै त थियौं । मैले अहिले पनि देखिरहेको छु त्यतिखेर आर्दिश अपारदर्शिताको आरोप लागेका धेरै मान्छेहरु टिम्सको पैसा रोक्नुपर्छ भनेर आइराखेका छन । हो यही पैसा आइहाल्छ कि भनेर रोक्ने बाहानाबाजी बाहेक हामीलाई लगाएको आरोपको कुनै अर्थ छैन ।
अर्को कुरा टिम्सको अहिले पैसा आएको छैन । पहिले क्षतिपूर्तिका लागि आएको एक करोड ८८ लाख रुपैयाँ मन्त्री आनन्द पोख्रेल भएका बेला सबै सम्बन्धित निकायको उपस्थितिमा बाँडेका छौं । त्यो हामीले घरघरानाबाट ल्याएका थियौ । के घरघरानाबाट ल्याएको पैसा हामीले अनियमितता गछौं ? त्यो गर्न मिल्छ ?
तपाई भन्नुहोस् त ? पछि कर्मचारी र घरभाडाका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ ल्याएका थियौं ।
त्यो रकम अब अन्य ठाउँमा खर्च गर्न मिल्छ ? सकिन्छ ? मलाई जवाफ दिनुत । यदी मैले त्यसो गरे भने भोलि घरघरानाबाट दिनुपर्छ । किनभने यहाँ अदालत छ, अख्तियार छ, महालेखा छ । टिम्सको कोषका विषयमा अख्तियारले पहिले पनि कुरा उठाइसकेको छ । यस्तो ठाउँमा म हात हाल्छु होला ?
त्यसैले टिम्सको पैसा यिनीहरुले ल्याउँछन । व्यवसायीलाई खुसी बनाउँछन र राम्रो काम गरेको छवि बनाउँछन भनेर हामीलाई विरोध गर्नेहरुले यो बहानाबाजी झिकेको हो । पर्यटन व्यवसाय सपार्न खोज्नेले यस्तो कुरा गर्दैन, विगार्नखोज्नेले मात्र यस्ता कुरा गर्नेहुन ।
० तपाईंहरुले टिम्सको पैसा अर्को क्षेत्रमा रकमान्तरण गरौं भन्दा विवाद भएको रे नि त ? कोषाध्यक्षले त्यसो भन्नुभएको छ ।
– हेर्नुहोस् उहाँलाई टिम्स भनेको के हो नै थाहा छैन । उहाँले टिम्सको बारेमा बुझ्नुपर्छ ।
० तपाईंको कोषाध्यक्षले नै टिम्स कोषको रकम अपचलन गर्न खोज्नुभयो भनेर आरोप लगाउनुभएको छ ? यस विषयमा तपाईंहरुले समितिमा छलफल गर्नुभएको छैन् ?
–हामीले हजारौ चोटी कुरा गरेका छौं । कुरा भएको थिएन, कार्यसमितिमा छलफल भएन्, दुई वर्षसम्म यो विषयमा कुरा नै भएन भन्ने कुरा सबै गलत हुन् । बारम्बार छलफल भएको छ ।
० राजनीतिक दलप्रतिको आस्थाले हो त समस्या निम्तिएको ?
– हैन । यो कुरा नगरौं डेमोक्रेटिक सिस्टममा हामीले हिजो पनि कुनै राजनीतिक दलको कुरा गर्‍यौ, भोट हाल्यौ, झण्डा बोक्यौ होला । भोलि पनि टान बाहिर त्यस्तो होला । त्यसलाई तपाईंले अन्यथा मान्न मिल्दैन । एक व्यक्तिको एक दिनमै हजारौ भूमिका हुन्छ, यो कुरा मैले हरेक ठाउँमा भन्ने गरेको पनि छु । घरमा बिहान उठ्दाको भूमिका, घरबाट निस्कदाँ र घर पुग्दाको भूमिका फरकफरक हुन्छ । कुनै संस्थाको अध्यक्ष घरमा पनि आफू अध्यक्ष भएको व्यवहार गर्दैन । उसको रोल फरक हुन्छ ।
कोही मान्छेले अरुलाई पार्टी देखेर उसले त्यस्तो व्यवहार गर्छ भने त्यो उसको कुरा हो । दोष र आरोप लगाउने ठाउँ नभएपछि भन्ने एक बाहाना होला राजनीतिक दलप्रतिको आस्था भन्ने विषय । किनकी हाम्रो टानको काम प्रर्यटन प्रबद्र्धन गर्नुहो । तपाई जुनसुकै राजनीतिक पार्टीलाई हेर्नुहोस उनीहरुले पर्यटनलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । त्यसैले टानले सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्नु जरुरी छ । हामीले त्यो गरेका पनि छौं ।
अब म तपाईंले अघि उठाएको कुरा भन्छु । हाम्रो समय अब तीन महिनाजतिमात्र बाँकी छ । त्यो बाँकी समयमा संस्थाको कार्य सञ्चालन गर्नुपर्दैन ? बाँकी बक्यौता फस्र्यौट गर्नुपर्दैन् ? कोषाध्यक्षले लेखाको भाषा बुझ्नुपर्दैन् ? गरेका कामको रकम तिर्नुपर्दैन ? पहिले आएका बिलको पेमेन्ट गर्नुपर्दैन ? हामीले अहिलेसम्म सहकोषाध्यक्षलाई प्रयोग गरेका थियौं ? सहकोषाध्यक्षको साइन आएको थियो ?
कार्यसमितिले छलफल गरी आवश्यक खर्च व्यवस्थापन र तिर्नुपर्ने रकमहरुको मिलान गरी सचिवालयमा भन्ने हो । कार्यसमितिको निर्णय अनुसार कसकसको चेकमा साइन चल्छ उनीहरुले साइन गर्ने हो । लेखालाई व्यवस्थित गर्ने काम एकाउन्टेन्टको हो न अध्यक्षको न कोषाध्यक्षको हो ।
अध्यक्षले त तथस्ट भएर काम गर्ने हो । विवाद भए मात्र आवश्यक अवस्था हेरेर बोल्ने हो । यस्तो बेलामा मैले बोल्नुपर्छ । जसरी यो विवादका विषयमा तपाईंले सोध्नुभयो मैले बोल्नुपर्‍यो । नत्र, एक पटक निर्णय गरेर गएको कुरा तीन महिनासम्म पनि कार्यन्वयन भएन, चेकमा साइन भएन भनेर अड्क्यो भने कसरी काम हुन्छ । सानातिना कुरामा अल्झेर बस्ने समय छैन । कसैसँग रिसले इबी साँचेर संस्थालाई बन्धक बनाउन कसैले पनि मिल्दैन । मैले भन्ने नै यही हो ।
० समाधान के होला त ? कि दुई चार महिनाको समय पनि विवादकै बीच कटाउने ?
– अब हेर्नुहोस् नराम्रो मान्छे र नराम्रो चीजले प्रभावित गर्न खोज्यो भने राम्रो चीज हावी हुनका लागि राम्रो कुरा प्रभावित हुनका लागि अलिकति प्रेसर गर्नुनै पर्छ । त्यसलाई विवादको रुपमा नलिई आपसी सफाईका रुपमा लिनुपर्छ । राम्रो नतिजा पाउनका लागि दुई चार महिना कुर्न परेपनि कुर्न त परिहाल्यो नि । नराम्रो कुरालाई निरुत्साहित गर्नु परिहाल्यो नि । राम्रो कुरा लागू गर्नकै लागि हामी चुनाव जितेर आयौं । धेरै साथीहरुले हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ । त्यही विश्वास अनुसार हामी संस्थामा रहेको दिनसम्म संस्थाको हितका लागि काम गर्नुपर्छ ।
आउँदा दिनमा यस्ता घटना नघटुन, आउँदो कार्यसमितिले यस्तो झण्झट नपाओस्, व्यवसायी यस्ता विवादबाट मुक्त बनुन् । सामान्य कामका कारण व्यवसायीको काम नै चौपट नहोस भनेर हामीले राम्रा कामको प्रोत्साहन र नराम्रा कुरालाई निरुत्साहित गर्ने हो । सबै काम हामीले गर्न सक्दैनौं तर, जति गछौं नमुनाको रुपमा देखाउने गरी गछौं भनेर लाग्या छौं । यो विवाद नभई आपसी माझिने विषय भएकाले चाँडै समाधान हुन्छ ।